Man United Oo Taariikh Kama Dambays Ah U Samaysay Wakhtiga Ay Kooxdeedu Iibin Karto Paul Pogba & Tirada Maalmaha Ay Real Madrid Haysato Si Ay U Hesho Saxeexiisa. - Gool24.Net
July 15, 2019 Apdihakem Omer Adem
Manchester United ayaa lagu soo warraayaa inay go’aan cusub gaadhay isla markaana ay samaysay taariikh kama dambays ah oo ay kooxdeedu fasixi karto xiddigeeda khadka dhexe ee Paul Pogba.
Real Madrid ayaa haatan ah kooxda kaliya ee ku jirta tartanka Pogba waxaana ay ahayd mid mudo bilooyin ah daba socotay balse Man United ayaa ahayd mid aad ugu adag inay iska fasaxdo khadka dhexe ee ree France.
Boodhka sarre ee Red Devils ayaa lagu sheegay inaysan marnaba doonayn inay fasaxaan Pogba maadaama oo uu yahay hoggaanka safka kooxdooda isla markaana ay kooxdu xiddig muhiim ah waayi doonto haddii uu ka baxo.
Dhinaca kale Real Madrid ayaa ka warqabta in Pogba uu bixitaan doonayo oo ay la saxeexan karto balse caqabada ayaa ah 200 ee Milyan euro ee ay Manchester United dalbatay taas oo ay tahay inay bixiyaan.
Haddaba, Manchester United ayaa doonaysa inay miiska wada xaajoodka timaado kaliya haddii ay Madrid lacagta 200 ee Milyan ah ogoshahay balse haddii sidoo kale loo baahdo gorgortan dhex mara Pogba iyo Madrid ayay caqabad kale dhalan kartaa.
Caqabada kale ayaa ah in Man United aysan aqbali doonin in Pogba uu ka baxo kooxdeeda 8-da August wixii ka dambeeya taas oo la micno ah in wadahadal dhex mara Pogba iyo Madrid uu wakhti u baahan doono maadaama haatan kaliya 23 maalmood hadheen.
8-da August ayaa ah maalinta uu xidhmayo suuqa kala iibsiga ee kooxaha England taas oo la micno ah in suuqu usii furnaan doono Yurubta kale balse aysan Man United heli karin bedelka Pogba wakhtigaas.
Real Madrid ayaa iyadu haatan wada qorshaheeda gaarka ah waxaana ay diraysaa qaar kamida xiddigaha aan looga baahnayn kooxdeeda xilli ciyaareedka cusub si ay dhaqaale ay ku maal-geliso Paul uga dhex hesho.